XAU/USD: Daily Analysis - 18 December 2017
နေ့စဉ် အရောင်းအ၀ယ် အစီအစဉ်များ
Analyst: Aung Thein Tun
30.11.2018 18:14 ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 30 November 2018
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 30 November 2018 အကျဉ်းချုပ် : အ၀ယ်ဘက်သို့ 51% ၌ ရှိနေပြီး … အရောင်းဘက်သို့ 43% ၌ ရှိနေပါသည် …
usd gold forex signals အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း forex exchange
26.11.2018 17:25 ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 26 November 2018
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 26 November 2018 အကျဉ်းချုပ် : အ၀ယ်ဘက်သို့ 58% ၌ ရှိနေပြီး … အရောင်းဘက်သို့ 36% ၌ ရှိနေပါသည် …
usd gold forex signals bitcoin အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း forex exchange
22.11.2018 16:56 ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 22 November 2018
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAU/USD) ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ - 22 November 2018 အကျဉ်းချုပ် : အ၀ယ်ဘက်သို့ 64% ၌ ရှိနေပြီး … အရောင်းဘက်သို့ 30% ၌ ရှိနေပါသည် …
usd gold forex signals အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း
11.02.2019 09:28 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ဒီတစ်ပတ် အရေးအကြီးဆုံး စီးပွားရေး ဖြစ်ရပ်များအပေါ် သဲလွန်စရလိုပါသလား? ဒီတစ်ပတ် ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသည့် ဈေးကွက် လှုပ်ရှားမှုများမှာ စိတ်ဝင်စားပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ USD, EUR, GBP, oil, gold နှင့် များစွာတို့အပေါ် နောက်ဆုံးသုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။
usd gbp eur nzd aud စီးပွားရေး ဒေတာ စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန်
01.02.2019 13:29 အပတ်စဉ် Forex သုံ
28.01.2019 09:59 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်